Kedu ihe m kwesịrị ị paya ntị na mgbe m na-azụ PVC plastic floor for shopping malls? -News-Topflor China ejedebeghị
Echiche:58 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2019-06-03 Mmalite: Saịtị
A na-eji PVC plastik eme ihe ugbu a na saịtị ndị na-ewu ụlọ dịka ụlọ, ụlọ akwụkwọ, na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eji ala ahụ eme ihe, ụlọ ahịa na-ejikwa ihe ndị ọzọ, yabụ otu esi ahọpụta PVC plastik na ụlọ ahịa, Topflor ga-eduga gị.
Mzụ ahịa nwere nnukwu njem ndị njem na nnukwu mpaghara, ya mere ogo nke ihe ala a chọrọ kwesịrị ịbụ dịtụ elu, ha ga-abụ ndị na-eguzogide ọgwụ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ụmụaka toro eto na ụlọ ahịa, nke nwere ike ibute mkpọchi na ịda. Plastic flooring bụ ihu ọma na-eyi na-eguzogide ma na-abụghị ileghara, sochiri agba na ọkpụrụkpụ.
Topflor A na-eji ala plastik eme ihe n'ọtụtụ ebe maka njem ndị njem, dị ka ụlọ ahịa, ụlọ ọgwụ, wdg, n'ihi Topflor Floorkwanyere n'ala homogenous penetrating usoro ngwaahịa nwere nnukwu abrasion eguzogide, ọma mgbochi skid arụmọrụ, na ọkụ fim B1, nke a na-ukwuu akp The ọrụ ndụ nke ịkwanyere plastic n'ala, Topflor Ihe owuwu PVC ala dị mma, belata oge owuwu ahụ, ma hụ na azụmahịa nkịtị nke nnukwu ụlọ ahịa.
Ya mere, iji zụta PVC plastic floor na ụlọ ahịa, ị ga-amata akara ahụ, nyochaa akụkọ nyocha ahụ, ma tụlee arụmọrụ ahụ. Topflor Plastickwanyere plastic flooring agafeela asambodo ule 40, gụnyere ngwaahịa, teknụzụ, na ihe owuwu.
Youchọrọ ịtọgbọ ala PVC na ụlọ akwụkwọ ọta akara?